Waa kuma George Weah, madaxweynaha cusub ee Liberia? - BBC News Somali
Waa kuma George Weah, madaxweynaha cusub ee Liberia?
Haddabe sidee ayuu halkan kusoo gaaray George Weah?
George Weah oo loo doortay madaxweynaha Liberia
Isaga oo yar ayuu bilaabay ciyaaraha kubbadda cagta, dadaal badan oo uu sameeyay ayuu ku gaaray heer ah in uu ka tago Clara, noloshiisana isbadal ku sameeyo.
Xitaa waxa uu dhexda uga tagay iskuulka si uu horumar uga gaaro kubbadda cagta, go'aankaas oo ahaa mid uu ku bullaalay, balse dhibaatooyin u keenay markii uu damcay in uu u tartamo xilka madaxtinimada.
Xiddig Kubbadda Cagta
Intii uu waqtiga socday, Weah waxa uu qaanadaha armaajadiisa ka buuxsaday abaalmarino kala duwan oo ay ka mid tahay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ee FIFA iyo abaalmarinta Ballon d'Or sanadkii 1995-kii.
Mar ayuu noqday danjiraha hay'adda carruurta adduunka ee UNICEF, wuxuuna ka qeybqaatay arrimaha samofalka.
Goolkii ugu dambeeyay ee Weah
Waxa uu xiligaas ahaa danjiraha UNICEF, shaqadiisana waxa ay ahayd in uu ku dhiirogaliyo da'yartii dagaalamaysay in ay hubka dhigaan.
Weah ayaa markii uu saxaafadda la hadlay kadib wariyaha ku yiri "waxaa la gaaray xiligii dadka yaryar ee dalkan ay hormuud ka noqon lahaayeen".
"Sidaasi darteed maanan la yaabin markii sanad kadib aan maqlay in uu Weah isu sharaxay madaxweynenimada" ayuu yiri wariyaha BBC-da.
Balse markii uu tartan la galay haweenayda kasoo baxday jaamacadda Harvard Ellen Johnson Sirleaf, waxaana dhacday in aqoon la'aantiisa iyo qibrad yaridiisa ay ka dhigtay in si sahlan looga guuleysto.
Mid ka mid ah wargeysyadii xiligaas soo baxay ayaa ciwaan bogga hore kusoo qoray far waaweyn oo ah 'Caanimo v/s Aqoon', oo loola jeedo in ay tartamayaan qof caan ah (Weah) iyo qof aqoon leh (Sirleaf).